For healt — Steemit
goldbloger8 (34)in #esteem •3years ago
ဒါဟာတူညီတဲ့အရာအားလုံးကိုရလဒ်များကို: သင်ရုံအိပ်မရနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့အိပ်မပျော်၏အခြေခံအကြောင်းတရားများမျိုးစုံဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ပြုလုပ်, ဇီဝဆေးပညာဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတစ်ဦးရောနှောဖြစ်စေခြင်းငှါ, မိုက်ကယ် Perlis, Pennsylvania ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာအပြုအမူအိပ်စက်ခြင်းဆေးပညာအစီအစဉ်၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကရှင်းပြသည်။ အိပ်မပျော်သငျသညျပြဿနာများအိပ်ပျော်နေသောအခါညဉ့်ရှိသူများကြိမ်အပေါ်အခြေခံပြီးအများအပြားကျယ်ပြန့်အမျိုးအစားသို့ကျရောက်, ဤကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအစပျိုးခြင်းနှင့်အတူ align လေ့ရှိပါတယ်။ "လက်မ၏တစ်ဦးကယေဘုယျစည်းမျဉ်းကိုသင်ညဥ့်ရဲ့ start မှာအိပ်ပျော်ဖို့ရုန်းကန်နေလျှင်, ထိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးဘဝဖြစ်ရပ်များကြောင့်ယ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Perlis ကပြောပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတစ်ဦးလည်း-တောက်ပတဲ့အခန်းနဲ့တူကိစ္စရပ်များကို-, ဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်ရန်သင့်စွမ်းရည်နှင့်အတူ device ကိုဖန်သားပြင်-နိုင်ပါတယ်လည်းရှုပ်ထွေးမှာစိုက်ကြည့်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, Perlis စိတ်ကျရောဂါ "နှောင်းပိုင်းတွင်အိပ်မပျော်" နဲ့ဒါနှောင်းပိုင်းကညဉ့်၌သငျနေ့အဘို့စောစောထရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေတာကြောင့်အိပ်ပျော်ရာမှသငျသညျ wrests ကြောင်းဖွမျိုးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဆိုသည်။
gastroesophageal reflux ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ် GERD နှင့်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်: ကသငျသညျအိပ်ပျော်င့်ပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်သင်၏မျက်စိပွင့်လင်းတွန်းအားပေးရာ "အလယ်တန်းအိပ်မပျော်," မှကြွလာသောအခါ, Perlis နှစ်ခုဘုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများမကြာခဏအပြစ်တင်ဖို့ပြောပါတယ်။ "သင်အသက်ရှုရပ်တန့်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်အမှု၌, သင်နှိုးပါ" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "အစာအိမ်အက်ဆစ်သင့်ရဲ့အစာပြွန်ကိုမီးရှို့ကြောင့် GERD နှင့်အတူ, သငျသညျနှိုး။ " အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်သူတို့ကိုသင်မှတ်မိဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်လျားနိုးမဟုတ်ပါဘူးသော်လည်းတောင်မှကျန်းမာရေးပာ, ညဉ့်နေစဉ်အတွင်းအကြိမ်အနည်းငယ်နိုး, Perlis ကပြောပါတယ်။ သင်တို့မူကားတစ်ဦးအချိန်-တစ်ဦးအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်တူသောနောက်ခံဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာမှာပဲမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ညဉ့်-များသောအားဖြင့်တစ်လျှောက်လုံးခေတ္တနှိုးထမှတ်မိနိုင်မယ်ဆိုရင်ဖွယ်ရှိပြဿနာဖြစ်တယ်, သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်သငျ့သညျ။ TIME ကကနျြးမာရေးသတင်းလွှာ နောက်ဆုံးပေါ်ကျန်းမာရေးနှင့်သိပ္ပံသတင်း Get ပေါင်း: မီးလောင်ရာမေးခွန်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးချက်များ။ ကြည့်ရန်နမူနာ ယခုဝင်မည် အသက်အရွယ်လည်းပြီးစိတ်ပျက်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းထိရောက်မှုလျှောက်လျော့နည်းအဟောင်းများအရကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအလင်းဇာတ်စင်-One အိပ်ပျော်ခြင်းရှိသကဲ့သို့," ဟုဒေါက်တာစန်ဒရာ Horowitz, အိပ်စက်ခြင်းဆေးပညာ Harvard Medical School ကရဲ့ဌာနခွဲနဲ့လက်တွေ့နည်းပြဆရာကပြောပါတယ်။ ပိုမိုပေါ့ပါးအိပ်ပျော်ခြင်းကိုပိုနှိုးစေပါတယ်။ တချို့ကဆေး, အထူးသဖြင့် beta ကို
blockers နှင့်အခြားနှလုံး meds ဤအသက်အရွယ်-related အိပ်ပျော်ခြင်းနှောင့်အယှက်ပိုဆိုးစေနိုင်သည်, သူကထပ်ပြောသည်။ tossing နှင့်လှည့်အဘို့များစွာသောအခြားရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်။ အခန်းရဲ့အပူချိန်ကနေအလုပ်လုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှအရာအားလုံးကိုငိုက်နှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။ သင်တို့မူကားအစဉ်အမြဲဖြောင့်မတ်3a.m. -သို့မဟုတ်သင်အိတ်-အရက်အပြစ်တင်ဖို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ် hit င့်ပြီးနောက်အချို့သောကြိုတင်ခန့်မှန်းကြားကာလပတ်လည်နိုးလျှင်မူကား, ဒေါက်တာ Damien Stevens, Kansas ပြည်နယ်ဆေးရုံတက္ကသိုလ်မှအိပ်စက်ခြင်းနှင့်အဆုတ်ဆေးပညာဆရာဝန်တစ်ဦးကပြောပါတယ်။ "သင်၏ဇီဝြဖစ်ပေါ် မူတည်. အရက်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်သင်၏ system စွန့်ခွာသွား," Stevens ကရှင်းပြသည်။ "အဲဒီဖြစ်ပျက်လာတဲ့အခါ, သင်နှိုး။ " ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးကူညီပေးသည်နှင့်အရည်အသွေးနာကျင်သောတိမောသေ
Roehrs, ဒက်ထရွိုက်အတွက်ဟင်နရီ FordHospital မှာအိပ်စက်ခြင်းမမှန်သုတေသန၏ဒါရိုက်တာ၏အဆိုအရအရက်များကိုသင့်ငိုက်အပေါ်တစ်ဦး "ဝိရောဓိ" အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Roehrs ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတာအရက်အိပ်စက်ခြင်းအပေါ်ရှိပါတယ်သက်ရောက်မှုများကိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ Hisresearch သငျသညျအရက်လောင်မကြာမီပြီးနောက်, bourbon ၏စပျစ်ရည်ကိုသို့မဟုတ် tumbler ၏ဖန်ငိုက်သို့သင့်ရဲ့နွယ်ဖွားမြန်ဆန်ကူညီပေးသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ "အရက် induces အဆိုပါအိပ်စက်ခြင်းအိပ်စက်ခြင်း၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအများစုပွနျလညျထူထောငျမျိုးဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသောပြင်းထန်သောအနှေးလှိုင်းဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်စပ်နေပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ ဒါကနက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းသင့်ရဲ့ညဥ့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလက်ဝါးကြီးအုပ်ချယ်လှယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖြိုဖျက်ပြီးအလွန်လျင်မြန်စွာအရက် metabolizes နှင့်ကကျခံထားနှင့်အတူပြီးဆုံးရဲ့တစ်ချိန်က, သင့်အိပ်ပျော်ခြင်း fitful ဖြစ်လာသည်။ ဘယ်သူမှအတိအကျအဘယ်ကြောင့်သိတယ်, Roehrs ကပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူနှင့်အခြားကျွမ်းကျင်သူများသင်၏အလောင်းသည်အသွေး၌အရက်ကိုချွတ်လည်းမီးလောင်ပြီးသွားသည့်အခါနိုးနိုးကွားကွားဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းတစ်နည်းနည်းနဲ့နှိုးဆွနေကြတယ်ထင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အရက်ဖြိုဖျက်သောအဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအများကြီးကွဲပြားခြားနားမထားဘူး။ သငျသညျအများအားဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီညဥ့်ကိုစပျစ်ရည်သို့မဟုတ်ဘီယာ၏တူညီသောငွေပမာဏကိုမျိုခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတစ်ဝှမ်းအိပ်သွားလျှင်ဒီတော့သင်တစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနာရီမှာနိုးတာပေါ့, Roehrs ကပြောပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦး nightcap ပျော်မွေ့သောသူတို့အဘို့ကောင်းသောသတင်းရှိပါတယ်။ အရက်အဘို့သင့်သည်းခံစိတ်အပေါ် မူတည်. ကပင်အနိမ့်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်ပမာဏသေချာပေါက်သင့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းနှောင့်အယှက်မည်မဟုတ်, Perlis ကပြောပါတယ်။ "ဘယ်လောက်ကိုသင်ရှိသည်နိုင်သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်နှင့်အခြားအမှုအရာ, သင်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး, သင့်သောက်သုံးသမိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "သင်မသောက်ရနှငျ့သငျလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုသင်ကအိပ်ကိုသွားသုံးမှငါးနာရီအကြာတွင်နှိုးထနေလျှင်မူကား, ထိုအရက်ကိစ္စကိုသောအလွန်ကြီးစွာသောညွှန်ပြချက်ပါပဲ။ " အရက်များအပေါ်ပြန် Cut, သင်၏အိပ်စက်ခြင်းမှဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပါ။
darhar tuunyetae aararaarrloneko raladmyarrko: sain rone aiut maraninepar . darpaymae aiutmapyaw eat aahkyayhkan aakyaunggtararrmyarr myoehcone hpyitkyasai ko ၎inn, pyulote, jew sayypanyarsinerar nhaint hcatepinesinerar pyaဿnarmyarrko tait u rawnhaaw hpyithcay hkyinn nghaar, mitekaal Perlis, Pennsylvania pyinaal takkasolmhar aapyuaamuu aiuthcaathkyinn sayypanyar aahceaahcain eat nywhaankyarrrayymhauu k shinnpyasai . aiutmapyaw s ngya s nyya pyaဿnarmyarr aiutpyawnaysaw aahkar ny ny shisuumyarr kyaain aapaw aahkyayhkanpyee aamyarraapyarr kyaal pya ant aamyoeaahcarr shoet kyarout, i ko kyaotain hkaant mhaann aahcapyoe hkyinn nhaintaatuu align lae shipartaal . " laat meat tait u k yaybhuyya hcaee myain ko sain ny inrae start mhar aiutpyaw hphoet ronekaan nay shin, hto hcoerain puupaan mhu shoetmahote hcate hpi hcee bhaw hpyitrautmyarr kyount y hpyitpartaal" hu Perlis k pyawwpartaal . paatwaannkyinhteinsaimrayy tait u laee- toutpatae aahkaann nae tuu kihchcarautmyarrko-, darmhamahote aiutpyaw raan saint hcwmrai nhaintaatuu device ko hpaansarrpyin- ninepartaal laee shotehtway mhar hcite kyi . aahkyarrtaithpaat twin, Perlis hcatekyarawgar " nhaawinnpine twin aiutmapyaw" nae dar nhaawinnpine k ny ny s ngya naeabhhoet hcawhcaw ht raan aatainnaakyaut hkine hcay naytar kyount aiutpyaw rar mha s ngya sanyya wrests kyaungg hpw myoe nhaint saathcaut naysaihu sosai . gastroesophageal reflux rawgar, darmhamahote GERD nhaint aiutpyaw hcain aasaatshuu kyaut: k s ngya s nyya aiutpyaw int pyeenout narre aanaeengaal saineat myethci pw ng lainn twannaarrpayyrar " aalaaltaann aiutmapyaw," mha kyaw lar sawaahkar, Perlis nhaithku bhone sayybhaat sinerar aahkyayaanaymyarr makyaarhkan aapyittain hphoet pyawwpartaal . " sain aasaatshu rautt ant parbhuu bharhpyitlhoetlellsotot aiutpyaw hcain aasaatshuu kyautamhu , sain nhaoe par" hu suu k shinnpyasai . " aahcaraain aaatsait saint raeahcar pyawan ko meeshhoetkyawwng GERD nhang aatuu, s ngya s nyya nhaoe . " aamyarrsone aahcateaapine aatwat suuthoetko sain mhaatmi hphoet lonelouttae shilyarr noe mahoteparbhuu sawlaee taungmha kyannmarrayy par, ny ny nay hcainaatwin aakyaain aanaeengaal noe, Perlis k pyawwpartaal . sainthoet muu karr tait u aahkyane- tait u aiutpyaw hcain aasaatshuu kyaut tuusaw nouthkan sayybhaat sinerar pyaဿnarmhar pell minait aanaeengaalabhhoet ny ny - myarrsaw aarr hpyint tait shoutlone hkaytt nhaoe ht mhaatmi nine maalsorain hpwalshi pyaဿnar hpyittaal, s ngya s nyya sararwaan tait u ko twaemyin sangya s nyya . TIME k k nyaya mar rayysatainnlwhar noutsonepaw kyannmarrayy nhaint sippansatainn Get paungg: meelaungrar mayyhkwannmyarr nhang kyawmkyinsuu aakyaanpayyhkyetmyarr . kyiraannamuunar yahkuwainmai aasaataarwal laee pyee hcatepyet aiuthcaathkyinn aatwat aahkyet taithku hpyitninepartaal . " kyanawthoet kyawantawthoetrae aiutpyawhkyinn htiroutmhu shout lyawwnaee aahaunggmyarrar kyanawthoet ko popyee aalainn jarathcain-One aiutpyawhkyinn shi sakaeshoet," hu douttar hcaan darar Horowitz, aiuthcaathkyinnsayypanyar Harvard Medical School k rae htarnahkwal nae laattwae naeepya sarar k pyawwpartaal . pomo potparr aiutpyawhkyinn ko po nhaoe hcaypartaal . tahkyahoetk sayy, aahtuu sahpyint beta ko blockers nhaint aahkyarrnhalone meds i aasaataarwal-related aiutpyawhkyinn nhaaw int aayhaat posoe hcay ninesai, suu k htaut pyawwsai . tossing nhaint lha eetabhhoet myarrhcwarsaw aahkyarr shinnlainnhkyet shipartaal . aahkaann rae aapuuhkyane k nay aalote lonehkyuanrayy nhaint paatsaatpyee hcoerain puupaan mhumyarr mha aararaarrloneko ngite nhaaw ng aayhaat payynine sai . sainthoet muu karrahcain aamyaell hpyaww ng maat3a.m. - shoetmahote sain aate-araat aapyittain hphoet hpyitkaungghpyitpartaal hit int pyeenout aahkyahoetsaw kyaotain hkaant mhaann kyarrkarl paatlai noe shin muu karr, douttar Damien Stevens, Kansas pyinaal sayyrone takkasolmha aiuthcaathkyinn nhaint aasote sayypanyar sararwaan tait u k pyawwpartaal . " saineat je wya hpaitpaw muutai.araat narre aanaeengaal aakyaartwinsaineat system hcw ant hkwar swarr," Stevens k shinnpyasai . " aellde hpyitpyet lar taeaahkar, sain nhaoe . " dar kyount nhait u hc lone kuunye payysai nhaint aaraiaasway narkyin saw ti mawsay Roehrs, daat ht rwite aatwathainnare FordHospital mhar aiuthcaathkyinn mamhaan sutaysan eat darritetar eat aasoaararaatmyarr ko sang ngite aapaw tait u " wirawdhi" aakyoesaatroutmhu shipartaal . Roehrs rae aasaatmwaywamkyaungg tararaat aiuthcaathkyinn aapaw shipartaal saatroutmhu myarrko aarronehcite larhkaesai . Hisresearch s ngya s nyyaaraat laung makyaarme pyeenout, bourbon eat hc pyit rai koshoetmahote tumbler eat hpaan ngite shoet saint rae nwal hpwarr myansaan kuunye payysai kyaungg aakyaanpyu htarrsai . " aaraat induces aasopar aiuthcaathkyinn aiuthcaathkyinn eat aanaatshinesone aamyarrhcu pwnyalanyya htuu htaw ngya myoe hpyithphoet hcain hcarr saw pyinnhtaansawanhaayy lhaine u nhaout lhuutsharrmhu nhaint aatuu saathcaut naypartaal" hu suu k sosai . dark naat shine saw aiuthcaathkyinn saint rae ny in rae pahtam u sone aahcateaapine taithku laatwarrkyeeaote hkyaal lhaal . darpaymaae saint hkandharko hpyaohpyet pyee aalwan lyinmyanhcwar aaraat metabolizes nhaint k kya hkanhtarr nhaint aatuu pyeesone rae taithkyanek, saintaiutpyawhkyinn fitful hpyitlarsai . bhaalsuumha aatiaakyaabhaal kyount sitaal, Roehrs k pyawwpartaal . darpaymae suu nhaint aahkyarr kyawmkyinsuumyarr saineat aalaungg sai aaswayaraat ko hkyawat laee meelaungpyee swarr saeet aahkar noenoe kwarr kwarr hpyitpaw hcay saihu u nhaout dhartupahchcaee tait naeenaeenae nhaoe sw naykyataal htainpartaal . saint hkandharkoaraat hpyaohpyet saw aasopar hpyithcain ko aamyarrkyee kwalpyarr hkyarrnarr m htarr bhuu . s ngya s nyyaamyarraarr hpyint tait u hkyinn hce ny in ko hc pyit rai shoetmahote bheyar eat tuunyesaw ngwaypamarn ko myao hkyinn nhaint taithkyanetaee tait wham aiut swarr shin detot sain tait u ko kyaotain hkaant mhaann narremhar noe tarpot, Roehrs k pyawwpartaal . shoetsaw tait u nightcap pyaw mwae saw suuthoetabhhoet kaunggsaw satainn shipartaal .araatabhhoet sang saeehkanhcateaapaw muutai. k painani m shoetmahote aalaalaalaat pamarn sayhkyaarpout saint rae aiuthcaathkyinn nhaaw ng aayhaat mai mahote, Perlis k pyawwpartaal . " bhaallout ko sain shisai nine saint rae aasaataarwal nhaint aahkyarramhuarar, sain bhaalloutkyeekyee, saint soutsone samine pawtwin muutai sai" hu suu k pyawwpartaal . " sain m sout r nhangya s ngya lyawwparr swarrmai hpyitsalo sain k aiut ko swarr sone mha ngarrnarre aakyaartwin nhaoe ht nay shin muu karr, htoaraat kihchcako saw aalwan kyeehcwarsaw nywhaan pyahkyet parpell . "araat myarraapawpyan Cut, saineat aiuthcaathkyinn mha hpyitpyet ko kyi par
#good-karma #esteemapp #leelar
3 years ago in #esteem by goldbloger8 (34)